Beasuccessor ! — Steemit
Beasuccessor !
ခေါင်းစဉ် ကိုကြည့်ပြီး မလန့်သွားပါနဲ့။ ဒီစာရေးမယ့်သူကတော့ တကယ့်ကိုဆရာကြီးလား ဆိုပြီးလည်း မထင်လိုက်ပါနဲ့။ တကယ့်ကိုဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ဒါဆိုဘာလို့ဒါကိုရေးလဲလို့ မေးရင်တော့ ဖြေစရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ "ကိုယ်ဖတ်ဖူးတဲ့ မှတ်ဖူးတဲ့ တွေးဖူးတဲ့အရာလေးကို ပြန်share"ချင်တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ 100% မှန်ပါတယ်လို့ အာမမခံပါဘူး။ သို့သော် နေရာတစ်ခုထိတော့ မှန်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ စပြောကြတာပေါ့။ ကျွန်မက ပထမဆုံး အနေနဲ့ အောင်မြင်ချင်သူတွေကို နှစ်မျိုးခွဲပါမယ်။
(၁)နေရာမှာတော့ ကိုယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့ နယ်ပယ်ကို အတိအကျသိတဲ့သူ ။ ဥပမာ ရုပ်ရှင် ဂီတ စီးပွားရေး စာပေ စသဖြင့်ပေါ့။
(၂) နေရာမှာတော့ အောင်မြင်ချင်ပေမယ့် ဘယ်နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ချင်မှန်း မသိတဲ့သူ။ဥပမာ ပန်းတိုင်ပျောက်နေသူမျိူးတို့ ကိုယ်ဘာဝါသနာပါမှန်းမသိသူတို့ပါ။
Image credit - https://pixabay.com/photos/person-mountain-top-achieve-1245959/
နံပါတ်(၁) နေရာက သူများကတော့ အောင်မြင်ဖို့ အထူးတလည် ကြိုးစားရမယ့် နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။
ကိုယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့ နယ်ပယ်ကိုသိထားတော့ ထိုနယ်ပယ်နဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ကိုယ်ကရုပ်ရှင်လောကမှာ အောင်မြင်ချင်တာကို စာပေလောကထဲ လေ့လာနေလို့မရသလိုမျိုးပါ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့နယ်ပယ်ရောက်ရင် ထိုနယ်ပယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာတွေကိုဖတ်မှတ်လေ့လာ သိတဲ့တတ်တဲ့သူတွေကို မေးမြန်းပြီးတော့ လုံ့လ ဝီရိယ ဇွဲ တို့ကို အချိုးကျပေါင်းစပ်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
နံပါတ်၂နေရာမှာ ရှိနေသူတွေကတော့ ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ တို့အပြင် တခြားကြိုးစားရမယ့် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နည်းလမ်းတွေက ကျွန်မပြောချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာပါပဲ။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိနေရပါမယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါဟာ နယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာ အောင်မြင်နေတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ထားရပါမယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိပ်ပြာလုံအောင် နေထိုင်ရပါမယ်။ကိုယ်အောင်မြင်နေချိန်မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှု ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်မှူမရှိဘဲ ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှု ဆိုပြီး လိပ်ပြာလုံနိုင်အောင် နေထိုင်ပါ။စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်" အိပ်ရေးဝဖို့ အကောင်းဆုံးသော ခေါင်းအုံးဟာ လိပ်ပြာလုံခြင်း"ပါတဲ့။လိပ်ပြာလုံလုံနေထိုင်ခြင်းကလည်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် လှေကားထစ်တစ်ခုပါပဲ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ လေးစားမှုရှိဖို့ပါ။ လေးစားမှုက အခြားသူကိုလည်း လေးစားမှုရှိသင့်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း လေးစားမှု ရှိရပါမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုရှိဖို့ဆိုအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲ ပြောရမယ်။ ကိုယ်ပေးတဲ့သမျှ ကတိတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ တည်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ကိုယ့်ဘက်ကမတည်နိုင်ရင် လုံးဝကတိမပေးပါနဲ့။ ပေးပြီးရင်တော့ တည်အောင်ကြိုးစားပါ။ဒါမှ ငါဟာ ဘယ်တော့မှကတိပျက်သူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှာပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှလည်း ကိုယ်လုပ်သမျှအရာတွေက ဖြစ်မြောက်မှာပါ။
အပေါ်ကအချက်တွေကိုသာ လိုက်နာမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။
Posted from my blog with SteemPress : https://steemhosting.com/aggamun/?p=195
Steemit မှ ကြိုဆိုပါတယ် မနှင်းအိခိုင်.... တကယ်တော့ Myanmar Steemit blogger တွေ မများ လှပါဘူး။ Original content ရေးသားတဲ့ Blogger ကိုကြိုဆိုပါတယ်... ကျွန်တော် Henry Aung ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းလေးနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖတ်သူတွေအကျိူးရှိအောင် ရေးပေးသွားပါမယ်။